Wasiir ka tirsan Norway oo loogu baaqay in uu iska casilo Xilkiisa
HomeWararka Maanta SomaliskaWasiir ka tirsan Norway oo loogu baaqay in uu iska casilo Xilkiisa
June 3, 2019 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Norway 0
Wasiir cadaalada Dalka Norway ayaa loogu baaqay in uu iska casilo xilka uu dowlada ka hayo.
Wasiirka ayaa lagu heesto shaqaaleysiinta Haweeney shari la’an ah taasi oo gurigiisa ka shaqeen jirtay sida ay sheegtay laanta socdaalka dalkaasi ee UDI.
Haweeneyda ayaa horay uga shaqeyn jirtay guri kala waxana ay ku soo wareegtay guriga wasiirka cadaalada kadib markii uu ka dhacay heshiiska hore lakin waxay aheyd in ay sharciga cusbooneysiiso ka hor inta aysan shaqo ka bilaabin guriga wasiirka.
laanta socdaalka Norway ayaa wasiirka Cadaalada Jøran Kallmyr ku heesata qodobka ah jabinta sharciga dalka iyadoona ugu baaqday in uu xilka iska casilo sida ugu dhaqsiyaha badan.
Raisal wasaarada Norway ayaa horay u sheegtay in Jøran Kallmyr uu yahay shaqsi ay ku kalsoontahay lakin falka dhacay ayaa ka dhigeysa in uu noqdo wasiirkii 6 aad ee xilkaasi baneeya mudada uu xisbiga Frp xilka hayo.